कपाल किन झर्छ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय « Lokpath
२०७७, ८ माघ बिहीवार २१:५२
प्रकाशित मिति : २०७७, ८ माघ बिहीवार २१:५२
काठमाडौं । कपाल झर्नु आम मानिसको समस्या हो । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, कतिपयको अस्वाभाविक तरिकाले कपाल झर्दछ तब यो समस्या र चिन्ताको विषय बन्छ ।
कपाल विभिन्न कारणले झर्दछ ।
आजभोलि नुहाएपछि कपाल सुकाउनका लागि प्रायले हेयर ड्राइअरको सहायता लिने गर्छन् । यो कपाल सुकाउन र हेयरस्टाइल बनाउनको लागि त तरिका हुन सक्छ । तर, कपालको स्वास्थ्यको लागि पनि त्यत्तिकै हानीकारक । अनुसन्धानले नै भनेको छ की कपाल बनाउनका लागि हरेक दिन यस्ता सामाग्रीको प्रयोग गर्दा कपाल विग्रीदै जान्छ ।
कपाल झर्नबाट कसरी रोक्ने ?
अण्डा र ग्रीन टी :
अण्डा खानाले शरीरलाई जति नै फाइदा गर्छ त्यतिनै कापालका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । अण्डामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटीन हुन्छ । त्यसैले एक वटा अण्डाको सेतो भाग र दईचम्चा ग्रीन टीको पेस्ट बनाएर कपालको जरासम्म लगाउनुहोस् र आधाघन्टा पछि सफा पानीले धुनुहोस् । यो हप्तामा तीन पटक सम्म गर्नुभयो भने तपाइँको कपाल झर्ने समस्या समाधान हुन्छ ।
प्याज र फिटकिरी :
प्याजमा एन्टीअक्सिडेन्ट नामक तत्व हुन्छ । यसले कपाल झर्नबाट रोक्न मद्दत गर्छ । तीन वटा प्याज र फिटकिरीको सानो टुक्रा लिनुहोस् र प्याजको रस निकालेर फिटकिरी पिसेर मसिनो धूलो बनाउनुहोस् र त्यसलाई मिलाएर रातभर कपालमा लगाई छाडिदिनुहोस् त्यसपछि बिहान कपाल राम्रोसंग धुनुहोस् । यो कार्य हप्तामा दुईपटक गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसले तपाइँको कपाल झर्नबाट रोक्छ ।
केरा र अण्डा :
एक एक वाटा केरा र अण्डा लिनुहोस् र केरा अण्डा मिलाएर पेस्ट बनाउनुहोस् र कपालमा लगाएर आधा घण्टा छाडिदिनुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले कपाल धुनुहोस् । यसो गर्नाले केही दिनपछि कपाल झर्न बिस्तारै रोकिन्छ ।
बोक्रासँगै फलफूल खानुका यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौं । सकेसम्म फलफूल खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएकोमा कुनै द्वीमत छैन ।
फाल्गुन २४ गते सोमवारको राशिफल
वि.सं. २०७७ साल फाल्गुन २४ गते । सोमवार । इ.स.२०२१ मार्च ०८ तारिक
तपाईको यो साता कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस् राशिफल
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) समय राम्रो रहेकोले समाजमा नेतृत्वदायी भुमिकामा बसेर काम गर्न सकिने तथा
यी हुन् विज्ञानले स्वीकारेका हिन्दू धर्मका चलनहरु